Ahoana ny fisafidianana ny marina Firenena Fampandrosoana Fampandrosoana Firaketana | Martech Zone
Folo taona lasa izay, samy te hanana ny zorony kelin'ny Internet miaraka amina tranokala namboarina ny tsirairay. Ny fomba fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny Internet dia miova amin'ny fitaovana finday, ary ny fampiharana dia fomba iray lehibe ahafahan'ny tsena marindrano maromaro mampiditra ny mpampiasa azy ireo, mampitombo ny vola miditra ary manatsara ny fitazonana ny mpanjifa.
A Tatitra Kinvey mifototra amin'ny fanadihadiana nataon'ny CIO sy ny Mpitarika finday dia nahitana fa ny fampandrosoana ny finday dia lafo, miadana ary mahasosotra. 56% amin'ireo mpitarika finday nohadihadiana no nilaza fa maharitra 7 volana ka hatramin'ny herintaona mahery vao manangana fampiharana iray. 18% no milaza fa mandany $ 500,000 ka hatramin'ny $ 1,000,000 isaky ny fampiharana, miaraka amin'ny $ 270,000 isaky ny fampiharana
Ny orinasam-pampandrosoana marina dia afaka manamboatra na manapotika ny fahombiazan'ny fampiharana iray, izay mahatonga ny fisafidianana ny tsara ho ampahany lehibe amin'ny fizotrany. Tsy tokony ho injenieran'ny rindrambaiko ianao vao handray fanapahan-kevitra voavolavola amin'ny firoboroboana mety indrindra amin'ny tetik'asanao. Ireto misy fomba fanao tsara indrindra tokony hoeritreretinao rehefa mihaona amin'ireo mety ho mpanome ianao.
Afaka mamonjy izay ilainao ve ny orinasa matanjakao?
Ny orinasa mahay sy manana traikefa dia manana portfolio lehibe. Mbola tsara kokoa aza - manana portfolio misy zavatra mifandraika amin'ny hevitra fampiharana anao manokana izy ireo. Nomena portfolio tsara ho anao mba hamerenanao azy, fa hahazo fahatsapana matanjaka kokoa ianao amin'ny fenitry ny famolavolana ny orinasa raha toa ianao ka afaka mahita zavatra mitovy amin'ny tadiavinao. Ohatra, alaivo ohatra hoe mila fampiharana iray mahita kiraro tsara indrindra ho an'ny vehivavy mpandraharaha ianao. Ny orinasa dia tokony ho afaka mampiseho fampiharana mifandraika amin'ny fivarotana na amin'ny ecommerce - teboka bonus ho an'ny fananana traikefa amin'ny fiantsenana kiraro.
Aza adino fa izy ireo koa dia mila kaody fanaovana traikefa amin'ny sehatra tianao hampiasaina handefasana ny fampiharana. Ny ankamaroan'ny fanombohana dia manomboka amin'ny fandefasana fampiharana amin'ny sehatra iray ary avy eo manitatra amin'ny manaraka raha vao fantany fa mpandresy ao amin'ny magazay app. Raiso ny lalao malaza Clash of Clans avy amin'ny Supercell izay nahatratra $ 2.3 miliara tao anatin'ny 6 taona monja. Ny lalao natomboka voalohany ho an'ny Apple iOS ary avy eo nitarina tamin'ny Android raha vao nahomby ny lalao. Ity dingana ity dia nanamaivana ny habetsaky ny fanohanana sy ny fihoaram-pefy ilaina amin'ny fanombohana ny lalao, mba hahafahan'ireo mpamorona fampiharana sy mpamorona mifantoka amin'ny fanatsarana ny mpampiasa azy fa tsy ny hadisoana ara-teknika sy ny fanitsiana amin'ny sehatra maro.
Ny ankamaroan'ny fanombohana dia manana drafitra lalao mitovy, ary ny orinasanao fampandrosoana dia tokony hanana traikefa matanjaka eo amin'ny sehatra kendrena. Ny orinasam-pampandrosoana dia matetika manana ekipa misy traikefa iOS sy Android, fa alao antoka fa manam-pahaizana amin'ny ekipa kendrenao ny ekipanao.
Ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana dia lakilen'ny fahombiazana
Amin'ny maha mpamorona fampiharana anao dia singa iray manakiana ianao amin'ny fizotran'ny fampandrosoana ny fampiharana iray manontolo. Ny mpamorona fampiharana sasany dia mihevitra fa afaka manolotra ny heviny amin'ny orinasam-pampandrosoana izy ireo, mahazo fanavaozana isan-kerinandro ary manadino ny ambiny. Raha ny marina, ny mpamorona dia tokony hiara-miasa akaiky amin'ny orinasa matanjaka mba hahazoana antoka fa voarindra mazava tsara amin'ny mpamorona ny fahitana.
Mihevitra ny tenanay ho mpiara-miombon'antoka amin'ny mpanjifanay izahay, mitarika azy ireo amin'ny traikefa fampandrosoana ny finday. Midika izany fa tsy fivarotana voafaritra-sy-manadino ihany koa izahay; ny mpanjifanay dia tsy maintsy atokana handray anjara amin'ny adihevitra momba ny fampiasa, ny fanapahana hevitra amin'ny fanapahana ary maro hafa. Mampindram-bola ny fahaizantsika, mazava ho azy, fa ny mpanjifa dia tafiditra ao anatin'ny dingana rehetra. Tena fizotry ny fiaraha-miasa ho an'ny olona rehetra tafiditra ao. Keith Shields, CEO, Designli
Ny orinasa tsirairay dia samy manana ny fomba entiny miatrika tetik'asa fampiharana, fa ny tsara indrindra dia miara-mipetraka amin'ny mpamorona, manampy azy ireo hamindra ny heviny amin'ny taratasy, ary handrakitra an-tsoratra tsara ireo antsipirihany alohan'ny hanombohan'ny kaody. Satria ny ekipa fampandrosoana dia vaovao tanteraka amin'ny hevitra, manakiana tanteraka ity dingana ity ary mila fiaraha-miasa tsara eo amin'ny roa tonta.
Mila manana fotoana hamolavolana sy handrafitra ny volavolan-kevitra ny mpandrindra anao, fa ny ekipa dia tokony hanana mpitantana tetik'asa vonona hiresaka raha misy ny fanontanianao.
Hevero ho toy ny a ny orinasanao fampandrosoana mpiara-miasa ary ampahany amin'ny ekipa iray mitondra ny hevitry ny fampiharana anao.
Ny traikefan'ny mpampiasa dia mihoatra ny sary sy layout fotsiny
Nandritra ny taona maro, ny rindrambaiko iray an'ny app dia niraikitra tamin'ny traikefan'ny mpampiasa. Ny roa dia nampiasaina nifanakalo, fa ny filàna hanasaraka azy ireo amin'ny lafiny endrika samy hafa amin'ny famolavolana ary namorona sehatra fianarana vaovao. Matetika ireo mpamorona fampiharana vaovao dia manjary manjavozavo ny traikefan'ny mpampiasa ary misavoritaka ny interface an'ny mpampiasa Ny interface an'ny mpampiasa dia ny bokotra, ny firafitra ary ny endrika izay mifanerasera amin'ny mpampiasa anao. Ny traikefan'ny mpampiasa dia ny fanamorana ny fampiasana sy ny fifanakalozana intuitive atolotry ireo singa ireo.
Ohatra, mety manana bokotra mandefa vaovao ianao. Ny bokotra dia singa iray ampiasain'ny mpampiasa interface. Moa ve takatry ny mpampiasa tanteraka fa ity bokotra ity dia ampiasaina handefasana vaovao ary azo jerena mora foana eo amin'ilay pejy? Ity dia singa iray amin'ny traikefan'ny mpampiasa. Ny traikefan'ny mpampiasa no laharam-pahamehana amin'ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa, izay mitarika fametrahana sy fitazonana ny mpampiasa.
Ny orinasanao mivoatra dia tokony hanana fifantohana mazava tsara amin'ny UI (interface an'ny mpampiasa) sy UX (traikefan'ny mpampiasa). Tokony hanana fahatakarana mazava momba ny famolavolana intuitive izay manampy ny mpampiasa hitety tsara kokoa ny fampiharana izy ireo.
Mety manontany ianao hoe ahoana no hahafantaranao zavatra toy izany? Satria manana ny portfolio-n'ny orinasa ianao dia afaka mahita ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny UX amin'ny alàlan'ny fisintomana ny fampiharana azy ireo amin'ny sehatra tianao ho kendrena. Android sy iOS dia manana nuansa famolavolana saro-takarina, ary ireo nuansa ireo dia takatry ny mpampiasa mazoto. Sintomy ny fampiharana, ampiasao ny endriny, ary tombano raha toa ny intuitive ny endriny ary manamora ny fitetezana azy io.
Inona no mitranga mandritra ny fametrahana?
Misy ny orinasa izay hanolotra ny kaody loharano ary hametraka izany amin'ny mpanjifa hamantatra ny ambiny, saingy tsy mandeha izany raha toa ka manana ekipa mpamorona anatiny sy manokana na manana karazana traikefa fampiharana ny mpamorona fampiharana. Safidy tsara kokoa dia orinasa izay manitsy anao amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fampiharana sy ny endriny ka hatrany amin'ny fanaparitahana ilay fampiharana. Ny famelana ny mpanjifa hiatrika ny fametrahana fotsiny dia tsy mahavita tanteraka ny tetikasa, ary tokony ho eo ny mpamorona hitarika ny mpanjifa amin'ny fizotrany.
Hanao fivoriana farany ianao izay anehoana ny vokatra vita. Raha vantany vao misoratra anarana ianao dia tonga ny fotoana hamindrana ny fampiharana avy amin'ny tontolon'ny fampandrosoana ho amin'ny famokarana. Mila kaonty mpamorona ao amin'ireo magazay fampiharana lehibe ianao, saingy ny orinasan-tserasera tsara dia manampy amin'ny fanamorana ny hetsika.
Ny fivarotana fampiharana tsirairay dia samy manana ny takiny, ary ny orinasam-pampandrosoana mahitsy dia mahafantatra ireo takiana ireo avy ao anatiny. Izy ireo dia afaka manampy ny mpamorona hiomana amin'ny fampakaram-bady toy ny fanomanana ny sary marketing, fampidirana izay rehetra Analytics kaody, ary mampakatra ny kaody loharano mankany amin'ny toerana mety.
Mety mila manadihady ianao ary mihaona amin'ny orinasa fampivoarana fampiharana alohan'ny hahitanao ny mety. Tokony hahatsapa ho mahazo aina ianao amin'ny orinasa nofidinao ary mahatoky tena fa afaka mitantana ny tetikasanao amin'ny maha-matihanina sy fanoloran-tena izy ireo.
Manao izany ianao amin'ny fametrahana fanontaniana be dia be - izay ilainao momba ny fampiharana anao sy ny fomba ampiasainy hamitana ilay tetikasa. Azonao atao koa ny mijery ny hevitra raha misy izy ireo. Azonao atao ny mandeha eo an-toerana na mahita orinasa mafy orina amin'ny Internet, izay tianao indrindra raha mbola tsara tantana ilay asa ary avoaka miaraka amin'ny manahirana kely ho an'ny mpanjifa.
Tags: developer rindrambaiko findayfampandrosoana fampivoarana finday